Fiaramanidina Fluoro Karbônika China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fiaramanidina Fluoro Karbônika - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Fiaramanidina Fluoro Karbônika)
Fividianana fiaramanidina fiara
Hexafluoropropyl methyl ether mpanadio fanadiovana ho an'ny Pharmaceutical intermediate Ny HFE cleaner dia afaka miparitaka sy miparitaka amin'ny rindrin'ny fantsona sy ny poreau samihafa, ary misy fiantraikany tsara amin'ny famonoana, ny famafazana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny Hydrofluoroether...
Hexafluoropropyl methyl ether mpanadio fanadiovana ho an'ny harona sarotra Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy...
Hexafluoropropyl methyl ethera solitany fanadiovana ho an'ny kristaly mangatsiaka Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy...
Hexafluoropropyl methyl ether cleaner ho an'ny Components Ny Hydrofluoroether (HFE) dia solvent organika. Amin'ny maha-chimie tsy misy ozona azy. Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy...
Hexafluoropropyl methyl ether fanadiovana ho an'ny solaitrabe Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo...
Fiaramanidina Fluoro Karbônika Fiaramanidina fluoro-karbônika Fiaramanidina Flow Fluorocarbon Fandroana Fluorocarbon Fiarovana amin'ny fluoro-karbônika Fiara manadio fiara Fiarovana matihanina azo antoka Fiara manadio trano